चीन तनाव ब्यान्ड कारखाना प्रत्यक्ष थोक योग तनाव बेल्ट फिटनेस निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु Meiao
कालो, रातो, नीलो, हरियो, पहेंलो
Q: त्यहाँ धेरै अयोग्य फिटनेस उपकरण बजार मा छन्, तपाइँ कसरी आफ्नो गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ
एक: हामी हाम्रो प्रतिरोधी टच स्क्रीन कारखाना र capacitive टच स्क्रीन कारखाना, जो खुला छ
भ्रमण को लागी ग्राहक।
Q: कसरी तपाइँको उत्पादन क्षमता को बारे मा, र तपाइँ कसरी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो सामान वितरण हुनेछ
A: MeiAo खेलहरु 6700 वर्ग मीटर र 8 उत्पादन लाइनहरु दैनिक चलिरहेको छ,2पाली छ
ठूलो मात्रा संग।
Q: के म पहिलो पटक गुणस्तर परीक्षण गर्न को लागी एक सानो आदेश राख्न सक्छु?
A: सानो आदेश पनि स्वागत छ, र केहि उत्पादनहरु हामी नमूना हाम्रो उत्पादनहरु को गुणवत्ता को परीक्षण को लागी प्रस्ताव गर्दछौं।
Q: म तपाइँको कारखाना भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ?
A: तपाइँ हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ।
Q: कहिले सम्म एक आदेश तयार गर्न?
A: हामी स्टक मा उत्पादनहरु को एक धेरै छ। सामान्यतया 5-15 दिन को आवश्यकता छ, ठूलो मात्रा मा कुराकानी को आवश्यकता छ।
Q: तपाइँको सेवा को बारे मा?
A: ढुवानी र नमूना गुणवत्ता ट्र्याकि life जीवन समय समावेश गर्दछ।
अघिल्लो: कारखाना थोक बारबेल बार प्रतियोगिता - जिम उपकरण कास्ट आयरन क्रोम सिल्वर electroplanted 10KG*2 लोहे को तौल प्लेट बिक्री को लागी - Meiao
अर्को: पेट को लागी नयाँ अभिनव उत्पादनहरु slimming मिसिन घर जिम उपकरण बहु कम
शरीर सौष्ठव संयोजन समायोज्य chromed दम ...
थोक जिम उच्च गुणस्तर वजन रबर लेपित ...
रंगीन तातो बेच्ने उत्पादनहरु पीवीसी राल जिम हेक्स ...
शक्ति प्रशिक्षण समायोज्य Dumbbells barbell ...